Aqalka boqortooyada Norwey oo mar kale casuumay labo wiil oo soomaali ah - NorSom News
Aqalka boqortooyada Norwey oo mar kale casuumay labo wiil oo soomaali ah
Aqalka boqortooyada Norwey ayaa mar kale casuumaad-sharafeed u fidiyay labo wiil oo soomaali ah, oona kala ah: Abdi Mohamed oo degan magaalada Florø iyo Abdirizak Mohamed oo degan magaalada Lillehamar. Sidoo kale aqalka boqortooyada Norwey ayaa horey casuumaad ugu fidiyay Xuseen Cabdi Yusuf oo degan magaalada Harstad.
Casuumaada loo fidiyay wiilashan soomaalida ah ayaa la xiriirta xaflada sanadguurada 25-aad ee kasoo wareegtay markii boqorka iyo boqorada Norwey(Kong Harald V iyo Dronning Sonja) loo caleemo saaray xilka boqortinimada wadanka. Waxaana xafladan gaarka ay ku casuumeen dad kor u dhaafayo 300 oo shaqo dadweyne oo muhiim ah u qabtay bulshada ku dhaqan wadanka, dadkaas oo laga soo xulay daafaha wadanka oo dhan.
Abdi Mohamed(sawirka bidix) oo degan magaalada Florø ayaa ah gudoomiyaha urur uu wax ka aas-aasay oo lagu magacaabo NOSFO (Norsk Selv- hjelp for Flyktninger). Ururkan uu Abdi madaxa ka yahay ayaa ka shaqeeyo sidii dadka wadanka ku cusub ee qoxootiga ah looga qaybgalin lahaa bulshada iyo deegaanka ay ku noolyihiin. Abdi oo u waramayay wargayska localka ah ee Firdaposten oo warbixin ka qoray casuumaadan sharafeedka ayaa sheegay: inuu ururkan ay u aas-aaseen kadib markii ay arkeen baahida weyn oo ay dadka qoxootiga ah ee wadanka ku cusub u qabaan dhexgalka iyo kamid noqoshada bulshada ay la noolyihiin. Abdi ayaa sheegay inuu arkey in dad badan qoxooti wadanka ku cusub ah aysan ka badanaa helin shaqo, iyo in ay ku adagtahay luuqa Norwiijiga. Sidaas darteedna ay abaabulaan kulamo ay dhexmara dadka qoxootiga ah ee wadanka ku dhashay, caruurtooda iyo dadka wadanka u dhashay, si ay isku bartaan luuqada wadankana ugu wada hadlaan.
Abdi Mohamed oo Norwey imaaday sanadkii 2009 ayaa sidoo kale sheegay in waagii ay Soomaaliya dowlada laheyd uu bartay kalkaaliye caafimaad(sykepleier), muda badana uu kasoo shaqeynayay howlo gar-gaar ah Soomaaliya gudaheena. Sidoo kalena uu horeu ula soo shaqeeyay ururka dhakhaatiirta aan xuduuda laheyn.
Abdirizak Mohamed(sawirka midig) oo isna lagu casuumay aqalka boqortooyada Norwey ayaa ah wiil da´yar oo 17 sano jir ah. Abdirizak oo Norwey degenaa mudo aad u kooban ayaa ku guulaystay tartan qoraal ah oo ku saabsan hidaha iyo dhaqanka.Wiilkan oo sidoo kale sheegay inuu aad ugu fiicanyahay maadada xisaabta uuna doonayo inuu jaamacad usii gudbo, uuna barto kuliyada dhaqaalaha.
Abdirizak ayaa sidoo kale sameeyay arin ay wargaysyada localka ah deegaanka Lillehamar ay aad u hadal hayeen dhawaantan, taas oo ku saabsan amaanada wiilkan dhalinyarada ah. Waxa uu meel ka helay faraanti dahab ka sameysan oo uu lahaa nin siyaasi ah oo ka tirsan xisbiga Høyre, caana ka ah magaalada Lillehamar. Wiilka ayaa faraantigii u geeyay ninka xukuma shaqadiisa, taas o ugu danbeyn sahashay in faraantigii uu dib ugu soo noqdo ninkii lahaa. Christen Bernhard Bjørnsgaard oo ah ninka lahaa faraantiga ayaa wargayska Gudbrandølen Dagningen u sheegay in faraantigan uu ahaa astaanta guurka isaga iyo xaaskiisa oo wada noolaa mudo 55 sano ah, uuna aad ugu faraxsanyahay uguna mahadcelinayo daacadnimada Abdirizak.
Sadexda wiil ee soomaalidaa ahba ayaa sheegay in warqadaha casuumaada ay si kadis ah ugu soo dhaceen sanduuqa boostada iyaga oo aan ka warqabin. Xafladan ay qoyska boqorka Norwey ugu dabaaldagayaan sanadguuradii 25-aad ee kasoo wareegtay markii loo caleemo saaray boqortinimada wadanka, ayaa lagu casuumay dad ajaaniib ah oo faro ku tiris ah. Soomaaliduna waxay nasiib u yeelatay in (ilaa hada inta la ogyahay ) ay ku yeeshaan sadex qof xafladaas. Waana horumar iyo wax lagu faano iyo sadex qof oo soomaali, shaqo dadweyne ay qabteen darteed loogu casuumo xaflada boqorka iyo boqorada Norwey. Sadexdan wiilba waxay wadanka joogeen mudo yar, iyaga deegaanka ay ku noolyihiin uga dhex muuqday shaqo dadweyne oo muhiim ah oo ay qabteen.
Journaalada Norwey oo awal xumaanta soomaalida banaanka keeni jiray, hadey dad soomaali ah amaantooda qorayaan, soo intaan wax kale la gaarin iyadba qayb guulaha kamid ah ma ahan?
Xigasho: GD.NO, FIRDAPOSTEN, Papiravis(13-08-2016, side 12)
Previous articleMolde: Nin soomaali ah oo ku geeriyooday dab ka dhacay guri kuyaalo Molde.
Next articleAbdullahi Allason oo si weyn uga soo horjeestay mamnuucida hijaabka iskuulka
Raage oo degan Bergen
Hambalyo dhalinyarada soomaalida ah ee la casuumay..Magaca soomaaliyeed meel walbe oo kor loogu qaadayo waa in la taageera…norsom waad na kaafiseen ee ilaahay idinka ha idin kaafiyo..